दल सिद्धान्त र विचारको आधारमा चल्नुपर्छ
हरेक राजनीतिक दलको सिद्धान्त र विचार रहेको हुन्छ। निश्चित लक्ष्यसहित स्थापना भएको दल देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ। कुनै दल पद र शक्तिको पछि दगुर्छ भने त्यसको भविष्य हुँदैन र त्यो दल स्थिर पनि हुँदैन। दलहरू सिद्धान्त र विचारमा नअडी आर्थिक कारोबारमा चलेकै कारण ती दलहरू छिनछिनमा फुट्छन्, जुट्छन्। राजपामा आबद्ध मधेसवादी दल, राप्रपा, नयाँ शक्ति नेपालभित्र देखिएको विवाद, असन्तोष र असहमतिका सवालहरू यसका पछिल्ला दृष्टान्त हुन्। त्यस्तो विचलन नेका, एमाले, माओवादी केन्द्रमा पनि नदेखिएको होइन। विचलन आउनु, विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेर गुट उपगुट देखिनु र अन्ततः पार्टी फुट्नुको रहस्य दलका नेताहरू सिद्धान्तनिष्ठ नहुनु हो।
दलको अस्पष्ट दृष्टिकोणले गर्दा राजपा स्थानीय तहको अन्तिम निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भयो। निर्वाचनमा आफ्नो दल बचाउने या टिकाउने उद्देश्यले नेका, माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर उम्मेदवारी दिने निष्कर्षमा पुगेको छ– राप्रपा। अरु दलसँग मिलेर उम्मेदवारी दिंदा आफ्नो दलको विचार जनतासमक्ष प्रचार गर्ने अवसर मिल्दैन। केबल संयुक्त उम्मेदवारलाई जिताउने हेतुले दलका नेताहरू प्रचारमा लाग्छन्। सहकार्य गरेर उम्मेदवारी दिंदा निर्वाचनमा दुई चार सीट बढी जित्न सक्छ तर दल र विचारबाट जनता सुसूचित हुनेछैनन्। अनि त्यस्तै दलहरू कहिले कुन दलसँग मिल्छन्, जुट्छन् त कहिले फुट्छन्। देशको नेतृत्व गर्ने, देश हाँक्ने र जनतालाई दिशाबोध गरेर अघि बढ्नुपर्ने नेताहरू नै पद र पैसाको पछि दगुरेपछि पद र पैसादको निम्ति राजनीति गर्न अघि बढेपछि देशमा कसरी विधिको शासन चल्छ, सुशासन चल्छ?
कतिपय दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार छन्, देश र जनताको हितमा लड्छन्, लडिरहेका छन्। सबै दललाई एउटै दृष्टिले हेर्नु मनासिव देखिंदैन, हेर्नु हुँदैन। निर्वाचनमा हारे पनि जिते पनि कम्युनिष्टको उद्देश्यअनुसार समाजमा आमूल परिवर्तन गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका दल पनि छन्। ती दलका नेता तथा कार्यकर्ताले पूँजीवाद र समाजवादको भेदबारे जनतालाई बुझाउँछन्, राजनीतिक रुपले सचेत पार्ने काम गर्छन्। तिनीहरू पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्दैनन्। बरु पद र पैसाका निम्ति राजनीति गर्ने दलको विरोध गर्छन्। सिद्धान्त र विचारलाई जोड दिन्छन्।
राजपाको राजनीति अहिले पनि मधेस केन्द्रित छ, साम्प्रदायिक छ र भारतीय शासकको पक्षमा हिंडेको छ। राजपाले देशघात हुने, नेपाललाई दूरगामी असर पार्ने खालको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्नु हुँदैनथ्यो, उनीहरूको माग पूरा गर्न नेका र माओवादी केन्द्र लाग्नु हुँदैनथ्यो, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू नै मुलुकलाई घात हुने खालको संविधान संशोधनतर्फ लागेपछि देश कसरी विकास हुन्छ? मुलुक कसरी समृद्ध बन्छ ?